သတင်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > သတင်း
Megan မေလ 21, 2017 1 မှတ်ချက် အကြားအမြင်ရတရားမျှတသောအပေါ်အတူတကွသံသယဝါဒီများနှင့်ယုံကြည်သူများကိုရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထား
တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်စနေနေ့အတူတကွတစ်ခုချဉ်းကပ် setting ကိုဖန်တီးဖို့ရည်မှန်းဘာသာရေးကျွမ်းကျင်သူများဆောင်ခဲ့လေ၏။
'' ထို့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ပြရန် '' အကြားအမြင်ရ Is သို့မဟုတ် Trump နိုင်သည့်အလားအလာ, Thoughts တစ်ဦးအလွန်လီမိတက်နံပါတ်ရှိထားသည်ဖြစ်စေ
Megan မေလ 10, 20173မှတ်ချက် ဖြစ်စေအပေါ် '' ထို့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ပြရန် '' အကြားအမြင်ရ Is သို့မဟုတ် Trump နိုင်သည့်အလားအလာ, Thoughts တစ်ဦးအလွန်လီမိတက်နံပါတ်ရှိထားသည်
ကျနော်တို့အခမဲ့ဗီဒီယိုများပေးစောင့်ရှောက်ရန်သင့်အကူအညီလိုအပ်! Patreon.com/MajorityReport သွားခြင်းအားဖြင့် Majority အစီရင်ခံစာ၏ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာပံ့ပိုးကြပါစို့! ဒီ Majority အစီရင်ခံစာကလစ်တှငျကြှနျုပျတို့ [ ... ] ၏အန်သိုနီ Atamaniuk ရဲ့အထင်အမြင်ကိုစောင့်ကြည့်
ထိုအခါအဘိဥာဏ်တောင်းဆိုချက်များသေ & အဆိုပါနှလုံးအတွက်ကိုယ်တော်တိုင် Stabbing ပြီးနောက်ကွယ်လွန်
Megan ဧပြီလ 26, 2017 20 မှတ်ချက် ထိုအခါအကြားအမြင်ရတောင်းဆိုချက်များသေ & အဆိုပါနှလုံးအတွက်ကိုယ်တော်တိုင် Stabbing ပြီးနောက်ကွယ်လွန်အပေါ်
အကြားအမြင်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များကြိုဟောဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်မှာအများအားဖြင့်ကြယ်သော်လည်း, ဒီတစ်ခုအဘိဥာဏ်သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သေဆုံးမှုများအတွက်အကောင့်ဘဲ, သူမဟုတ်ရင်ထင်သော်လည်း။ [ ... ] Complex News မှ Subscribe
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြားအမြင်တစ်ဦးကစျေးအကြောင်းမူကား, ထိုသူတို့သည်သင့်ပေရဲ့စိတ်ကိုဖတ်ပါနိုင်သလားတိုင်ကြား | TODAY
Megan မတ်လ 20, 20172မှတ်ချက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အကြားအမြင်အပေါ်သူတို့ဟာတစ်ဦးကစျေးအဘို့, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ရဲ့စိတ်ကိုဖတ်ပါနိုင်သလားတိုင်ကြား | TODAY
သင့်ရဲ့ခွေးစကားပြောနိုင်မည်ဆိုပါကအဘယ်သို့ဆိုမည်နည်း "အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အကြားအမြင်" သင်ပြောပြရန်, ဒါပေမယ့် Rossen အစီရင်ခံစာများထုတ်ဖော်ပြသအဖြစ်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုစျေးပေါလာကြဘူးနိုင်တော့မည်ဆိုမှု။ ယနေ့အမျိုးသား [ ... ]
အကြားအမြင်တကယ်သေဖို့ Talk နိုင်သလား?
Megan မတ်လ 19, 2017 18 မှတ်ချက် Can အကြားအမြင်အပေါ်တကယ်သေဖို့ Talk?
ကျော်ကြားတဲ့အလတ်စားဂျိမ်းဗန် Praagh '' GMA ရဲ့ Josh Elliott သည်ရဲ့အတိတ်သို့ကြည့်ရှုသည်။
| '' ဟောလိဝုဒ်အလတ်စား '' Tyler ဟင်နရီ, Matt Lauer တစ်ခုကစိတ်ခံစားမှုစာဖတ်ခြင်းကိုပေးသနား TODAY
Megan မတ်လ 17, 2017 20 မှတ်ချက် အပေါ် '' ဟောလိဝုဒ်အလတ်စား '' Tyler ဟင်နရီ, Matt Lauer တစ်ခုကစိတ်ခံစားမှုစာဖတ်ခြင်းကိုပေးသနား | TODAY
Tyler ဟင်နရီ "Tyler ဟင်နရီနှင့်အတူဟောလိဝုဒ်အလတ်စား" ပေါ်တွင်မိမိအသိသာအဘိဥာဏ်အစွမ်းအနှင့်အတူလူ wows နှင့်အလတ်စားအဖြစ်သူ၏ဘဝအကြောင်းကိုထွက်လာမယ့်အသစ်တခုစာအုပ်ရှိပါတယ်။ [ ... ] အဖြစ် Watch